Real Madrid Oo Dib Ugu Yeeraysa Dani Ceballos Oo Ku Sugan Arsenal
Home Horyaalka Ingiriiska Real Madrid oo dib ugu yeeraysa Dani Ceballos oo ku sugan Arsenal
Real Madrid oo lagu soo waramayaa inay ka fiirsaneyso inay dib ugu soo celiso Dani Ceballos amaahdii uu ku joogay Arsenal iyadoo ciyaaryahanka khadka dhexe uu ku dhibtoonayo inuu ku bilowdo Kooxda.
24 jirkaan ayaa qaab ciyaareed fiican ku soo qaatay Mikel Arteta intii uu amaahdii ugu horeysay ku qaatay kooxda xilli ciyaareedkii hore, waxaana dib loogu soo dhaweeyay Emirates Stadium.
Si kastaba ha noqotee, Ceballos ayaa ku guuldareystay inuu boos joogto ah ka helo kooxda Arteta xilli ciyaareedkan, iyadoo Granit Xhaka iyo Mohamed Elneny laga doorbiday ciyaaryahanka reer Spain guulihii ugu dambeeyay ee Gunners ka gaarto Chelsea iyo Brighton & Hove Albion.
Soo laabashada dhow ee Thomas Partey ayaa sidoo kale qarka u saaran inay carqaladeyso rajada Ceballos ee ah inuu ku soo laabto kooxda, Calciomercato ayaa sheegtay in Real Madrid ay raadineyso inay joojiso heshiiskiisa amaahda ee Emirates Stadium.
Warbixinta ayaa intaa ku dareysa in ciyaaryahanka khadka dhexe uu xiiso weyn ka helay Serie A inkastoo uu ku dhibtooday caasimada Ingariiska, iyadoo Juventus , AC Milan iyo Inter Milan ay dhamaantood baadi goob ugu jiraan saxiixiisa.
Ceballos ayaa durbaba 22 kulan u saftay kooxda Arteta tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan, laakiin kaliya wuxuu ku soo bilowday sideed ka mid ah 16kii kulan ee ay ilaa iyo haatan ciyaareen Arsenal.
Previous articleFalanqeynta Kulanka West Bromwich Albion vs Arsenal: Gunners oo guushii Sadexaad raadineysa
Next articleArsenal oo isha ku heysa inay u dhaqaaqdo daafaca reer Spain ee aadka loo doonayo